मकवानपुरगढी आमभञ्ज्याङमा गरियो यस्तो प्रतिबद्दता !
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिका आमभञ्ज्याङमा बालविवाह, वहुविवाह, बालश्रम, मानव बेचविखन,बालयौन दुव्र्यवहार तथा महिला हिंसा विरुद्घ क्रियाशील रहने सामुहिक प्रतिबद्दताज नाइएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ६, आमभञ्ज्याङ्को आयोजना, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल मकवानपुरको सहयोग तथा बाल कल्याण समाज मकवानपुरको प्राविधिक सहयोगमा...
गाउँमा बाल संरक्षण समितिको सक्रियता
मकवानपुर । मकवानपुरका विभिन्न गाउँमा रहेका स्थानीय बाल संरक्षण समिति जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि क्रियाशील बनेका छन् । बाल कल्याण समाज मकवानपुरले युनिसेफ नेपालसंगको सहयोगमा गाउँमा बाल संरक्षणको सवालमा आवश्यक कार्य गर्न समितिलाई सहजीकरण गरेपछि समिति सक्रिय बनेको हो । जिल्ला बालकल्याण समिति मकवानपुरको समन्वयमा बाल...
मकवानपुर । मंगलबार साँझ मनहरी ७ समिलडाँडामा खुकुरी प्रहारबाट तीन जनाको ज्यान गएको घटनाबारे जानकारी लिन मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेती घटनास्थल पुगेका छन् । उनले घटनास्थलको अबलोकन गर्दै मृतकका परिवारलाई भेटेका छन् । उनले घटनास्थलमा पुगेर घटनाबारे जानकारी लिँदै अत्यन्तै दुखद् घटना भएको भन्दै शोकसन्तप्त परिवारजनलाई...
मकवानपुर । मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका राइगाउँकी बालिका कविता मगर (नाम परिवर्तन) की आमा अन्तै विवाह गरी हिडीन् । उमेरमा ६० नाघेका वृद्घ बाबुको साथमा बस्दा उनलाई आवश्यक शिक्षा दिशाको व्यवस्था हुन सकेन । बाबु जाँड रक्सी खाने र परिवारको वास्ता नगर्ने कारण आमा अन्तै हिडेपछि उनी समस्यामा परिन् । स्थानीय विद्यालयमा ६ कक्षा अध्ययन गर्दा गर्दै...
हाँडीखोलाका बाढीपहिरो प्रभावितले पाए राहत
मकवानपुर/गत साउनको अन्तिम हप्ता परेको भिषण वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट पीडित स्थानीयलाई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले राहत सङ्कलन गरी वितरण गरेका छन् । मनहरी गाउँपालिकास्थित हाँडीखोलाका बाढी तथा पहिरोपीडितलाई विदेशमा संकलित रकमबाट राहत सामाग्री वितरण गरिएको हो। जापान र कोरियामा रहेका युवाले संकलन गरेको दुई लाख एक हजार पाँच सय...
मकवानपुर/अविरल वर्षाको कारण मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा मानवीय क्षति नभएपनि धेरै नागरिक पीडामा परेका छन् । साउन २७ गतेबाट सुरु भएको वर्षाका कारण गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा गरी ३ सय भन्दा बढी घर घर पुर्ण रुपमा क्षति भएको पाइएको छ । वर्षाको पाचौँ दिन जिल्ला बालकल्याण समिति मकवानपुरको अगुवाइमा बालकल्याण समाज मकवानपुरका कार्यक्रम...
आज सुदूरपश्चिममा ओल्के पर्व मनाइँदै
कैलाली/ भाद्र कृष्णपञ्चमी अर्थात भाद्र सक्रान्तीका दिन बिहीबार सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा ओल्के पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ । ओल्के भन्नाले सौगात उपहार वा कोसेली भन्ने बुझिन्छ । वर्षा ऋतुसँगै नवजीवन प्राप्तिको उत्सवको रुपमा ओल्के पर्व मनाइन्छ । बिहानै नुहाईधुवाई गरी विभिन्न परिकार बनाएर आजका दिन आफन्तलाई ओल्को अर्थात उपहार...
किन मिल्दैनन् सहकारी ?
मकवानपुर/मकवानपुरमा गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सहकारीहरु एकीकरण गर्ने भनिएपनि लक्ष्य अनुसारको काम भने हुन सकिरहेको छैन । एउटै उद्घेश्य भएका धेरै सहकारीहरुका बिचमा एकीकरण गरी सहकारी व्यवस्थित गर्नका लागि एकीकरण कार्य सुभारम्भ गरिए पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम हुन भने सकेको छैन । सहकारी मन्त्रालयले मकवानपुरको सहकारीहरु बिचमा पनि...
मकवानपुर/हेटौंडा ९ स्थित शान्तिचोक टोल विकास संस्थाको सातौ वार्षिक साधारण सभा भएको छ । वडा अध्यक्ष लक्ष्मण भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता एवम् संस्थाका अध्यक्ष खिलाकुमारी लामिछानेको अध्यक्षतामा वार्षिक साधारणसभा भएको हो । सस्थाका सचिव केशव कार्कीले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सीता गौतमले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए...